Vatori veNhau Vaviri Vanosungirwa Kusvibisa Zita raChief Supt Makedenge
Chikumi 29, 2011
Mupepeti webepanhau reThe Standard, VaNevanji Madanhire, vasungwa neChitatu pamwe nemutori wavo wenhau, Muzvare Patience Nyangove.
Vaviri ava vari kupomerwa mhosva yekusvibisa zita nehunhu hwemumwe mukuru mukuru wemapurisa pamanyorero nemaburitsiro avakaita nyaya yekusungwa kwegurukota rinoshanda riri muhofisi memutungamiri wehurumende, VaJameson Timba.
Mupurisa anonzi akasvibiswa ndi Chief Superintendent Crispen Makedenge, avo vanoshandira kudivi reLaw and Order.
Mutauriri wemapurisa mupurovhinzi yeHarare, Va James Sabau, vati vatori venhau ava vakaburitsa nyaya yekuti VaMakedenge vaivepo pakasungwa VaTimba neChishanu asi ivo VaMakedenge vaive vasipo. VaSabau vati munyaya yakabuda mubepanhau re The Standard iyi nemusi weSvondo, VaMakedenge vakatorwa semunhu anoshungurudza vanhu.
Mupepeti mukuru we Alpha Media Holdings, kambani inodhinda bepanhau re The Standard, VaIden Witherell, vaudza Studio7 kuti VaMadanhire naMuzvare Nyangove vasungwa vachatongotanga basa.
VaWitherell vashora kusungwa kwaitwa vatori venhau vaviri ava vachiti hazvipindirane nemashoko akataurwa nemukuru mukuru wemapurisa, Commissioner General Augustine Chihuri mazuva mashoma apfuura ekuti mapurisa ave kuchengetedza kodzero dzevanhu.
Munyori mukuru musangano revatori venhau, reZimbabwe Union of Journalists, VaFoster Dongozi, vashora zvikuru kusungwa kwaitwa VaMadanhire pamwe naMuzvare Nyangove.
VaDongozi vati vatori venhau vave kutya kuita basa ravo vakasununguka zvichitevera kugarosungwa sungwa kwavari kuitwa.
VaDongozi vakurudzira vari muhurumende pamwe neveruzhinji kuti vaendese zvichemo zvavo kusangano re Voluntary Media Council of Zimbabwe kana vachinge vasina kugutsikana nezvinenge zvabuditswa mumapepanhau kana panhepfenyuro.
Gweta riri kumirira vaviri ava, Muzvare Linda Cook, vaudza Studio7 pataenda pamhepo kuti vange vachiri pakamba yemapurisa pa Harare Central apo vasungwa ava vanga vachiri pakati pekusainiswa mapepa eyambiro yemhosva yavari kupomerwa.
Vachitaura pamusoro pekusungwa kwevatori venhau ava, mutevedzeri wegurukota rinoona nezvekuburitswa kwemashoko, Va Murisi Zwizwai, vakurudzira vatori venhau kuti vasavhundutsirwa nemapurisa sezvo zviri kuitika izvi zvakanangana nekuvatadzisa kuita basa ravo nemazvo.
Vatiwo maonere avo mune vamwe vanhu mu Zanu PF vari kuda kuti vatori venhau vatadze kunyora nyaya dziri kuitika munyika pachokwadi.